Hlola iPuerto Rico - World Tourism Portal
Yini ukubona. Izindawo zokudlela ezihamba phambili ezihamba phambili ePuerto Rico.
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yasePuerto Rico
Bukela ividiyo ekhuluma ngePuerto Rico
Hlola iPuerto Rico a I-Caribbean isiqhingi okuyi-Commonwealth ebusayo ese-United States of America. Itholakala olwandle lweCaribbean ngasempumalanga ye i-Dominican Republic nangasentshonalanga yeziQhingi Zase-US, iPuerto Rico isemgaqweni omkhulu wokuthumela ePanama Canal, i-Mona Passage.
UChristopher Columbus wafika esiqhingini sasePuerto Rico e1493 ohambweni lwakhe lwesibili lokutholwa, futhi ekuqaleni walibiza ngegama elithi San Juan Bautista ukuhlonipha uSanta John the Baptist. Igama lenhloko-dolobha yanamuhla yalesi siqhingi, iSan Juan, lidumisa igama lokuthi uColumbus wasinika kuqala lesi siqhingi. Yabuye yaxazululwa umhloli wamazwe uPonce de Leon, futhi lesi siqhingi sasesiphethwe iSpain isikhathi esingaphezu kwamakhulu amane eminyaka.
Isiko lasePuerto Rico licishe liyiCaribbean, kodwa lihlobene kakhulu nesiko le Spain namathonya ambalwa ase-Afrika nawomdabu. Lapho uhambela ePuerto Rico, umuntu uzothola umuzwa wokuthi bakwelinye izwe.
IPuerto Rico inesimo sezulu sasolwandle esishisayo, esiphansi futhi sinokuhlukahluka okushisa kwesizini. Ukuna kwemvula kukhulu ogwini olusenyakatho nasezindaweni eziphakemeyo, kodwa kukhanya ngasogwini oluseningizimu. Isiphepho sesizini siqala phakathi kukaJuni noNovemba, lapho kuqala khona imvula kube kanye ngosuku, cishe nsuku zonke. Isomiso esenzeka ngezikhathi ezithile kwesinye isikhathi sithinta isiqhingi.
IPuerto Rico inezintaba kakhulu, yize kukhona ibhande elingasogwini enyakatho. Izintaba zehla ngokuqonda olwandle ogwini olusentshonalanga. Kunamabhishi anesihlabathi ikakhulu ngasogwini. Kukhona imifula eminingi emincane ngalesi siqhingi, futhi izintaba eziphakathi nendawo ziqinisekisa ukuthi umhlaba unamanzi amaningi, yize ugu oluseningizimu selomile. Ibhande elingasogwini elisenyakatho livundile. Indawo esePuerto Rico ephezulu kakhulu iseCerro de Punta, eyi-1,338m ngaphezulu kwezinga lolwandle.
Carolina - Isikhumulo sezindiza saseLuis Muñoz Marín, isigcawu sekilabhu i-Isla Verde, amahhotela namakhasino
ISan Juan inhlokodolobha inomunye wemachweba amakhulu emvelo eCaribbean
IGuanica - Ihlathi Elimnyama Lendalo lasePuerto Rico (iBosque Seco de Guánica)
Lajas - i-bioluminescent bay eLa Parguera
UPonce - idolobha lesibili ngobukhulu ePuerto Rico
ISalinas - ISalinas Speedway, i-400 m racing
I-Rincón - eyaziwa nge- "Surfing Capital" yeCaribbean
ILuquillo - indawo enhle kakhulu yokubhukuda yomphakathi, indawo yokubhukuda evikelwe ngamatshe ngokubuka kwe-El Yunque Rainforest
I-Fajardo - i-marina, i-bioluminescent bay, i-Vieques neCulebra
I-Río Grande - ukungena kwe-El Yunque rainforest
I-Arecibo - ikhaya lesinye seziteshi zomsakazo ezinkulu kakhulu emhlabeni.
I-Aguadilla - Ukushweza olwandle nokudla kwaseThai
I-Camuy - uhlelo olukhulu lomhume
UDorado - ipaki lomphakathi, iNolos Morales Beach, indawo yomndeni evikelekile
Isabela - ukusebenzisa ama-surfing ngokweqile
ISan Juan yakudala
Ihlathi lemvula lase-El Yunque
Isiqhingi saseCaja de Muertos - iCaja de Muertos ngamafuphi; isiqhingi esingenamuntu esisogwini oluseningizimu yePuerto Rico. Lesi siqhingi sivikelekile ngenxa yesiphithiphithi sendabuko sakhona. Izintaba ezihamba ngasolwandle nabahamba ngasolwandle zivame ukubonwa kulesi siqhingi, ezingafinyelelwa ngesikebhe noma ngokusebenzisa abagibeli bokuvakasha abahamba emkhakheni weLa Guancha Boardwalk ePonce Playa.
IGuanica State Forest (iBosque Estatal de Guánica) - indawo enkulu kunazo zonke esisele ehlathini elishisayo elisogwini emhlabeni, futhi yaqokwa i-Biosphere Reserve ese-1981. Ipaki enenqwaba yehlathi elomile yaziwa ngokuthi i-el bosque seco de Guánica (“ihlathi elomile laseGuanica”).
ISan Juan National Historic Site - ifaka phakathi iSan Cristóbal, iSan Felipe del Morro, ne-San Juan de la Cruz forts (eyokugcina eyaziwa nangokuthi i-El Cañuelo), kanye nama-bastion, izindlu ze-powder, kanye nengxenye yesithathu odongeni lwedolobha. Zonke lezi zinqaba ezivikelayo zizungeza indawo yakudala, engamakholoni yeSan Juan futhi ziphakathi kwezindawo ezindala nezivikelwe kakhulu zaseSpain zaseMelika.
I-Mona Island - ngasogwini olusentshonalanga yesiqhingi esikhulu, phakathi nendawo kuya i-Dominican Republic. Lesi siqhingi sodwa futhi sihlala kuphela izilwane zasendle. Kungavakashelwa kuphela ngokuqokwa.
I-Rio Camuy Caverns - uhambo oluholwa ngemizuzu engu-45 oluhamba emhumeni omkhulu, iCueva Clara, kufaka phakathi umbono "womfula omkhulu kakhulu ongaphansi komhlaba u-3rd emhlabeni" kanye nesinki enkulu
Isikhumulo sezindiza esikhulu ePuerto Rico iLuis Muñoz Marín International Airport e-Carolina, eduze neSan Juan. IJet Blue, i-United, ne-Ghost nayo indiza kwizikhumulo zezindiza ezincane emadolobheni ase-Aguadilla nasePonce.
Izimpawu zomgwaqo yizinguqulo zolimi lwaseSpain zabalingani babo base-US, ngakho-ke akufanele ube nenkinga ukuzithola. Kodwa-ke, qaphela ukuthi amabanga asemakhilomitha, ngenkathi imikhawulo yesivinini imamayela. Igesi nayo iyathengiswa ilitha, hhayi nge-gallon, futhi ishibhile kancane kunezwe.
IsiSpain nesiNgisi yizilimi ezisemthethweni zasePuerto Rico, kodwa iSpanish ngaphandle kokungabaza yilona limi oluvelele. Bambalwa kunamaphesenti ama-20 ePuerto Ricans abakhuluma kahle isiNgisi. ISpanishi siwulimi lwenkobe lwazo zonke izindabuko zasePuerto Ricans. Kodwa-ke, abantu abasebenza emabhizinisini ahlobene nezokuvakasha bavame ukukhuluma kahle isiNgisi; abantu bendawo ezindaweni ezingatheni izivakashi zesiqhingi bavame ukuphatha English eyisisekelo, ngoba ifundiswa njengolimi lwakwenye esikoleni.
Izindawo ezithatha amakhadi wesikweletu zivame ukuthatha i-Visa ne-MasterCard kuphela. Amahhotela amakhulu nezindawo zokuqasha izimoto kungenzeka zithathe i-Discover ne-American Express. Izindawo eziningi zithatha imali kuphela. Cabanga ukuletha imali eyanele kanye nawe ukuze usebenze ukuhoxiswa okukodwa noma okubili uma uzokhokhiswa imali yokuthenga.
Ngokuthenga imfashini okujwayelekile, hlola amaBelz Factory Outlets (Canovanas) kanye nePuerto Rico Premium Outlets (Barceloneta). Zibonisa izitolo ezinkulu zegama lomkhiqizo njengePolo, Tommy Hilfiger, republic banana, Puma, Gap, PacSun, njll.
Amadolobha amakhulu amaningi kulesi siqhingi anendawo enkulu yezindawo enezitolo ezijwayelekile zomhlaba wonke.
Uma ufuna ubuciko bendawo bazo zonke izinhlobo, futhi ufuna ukukhokha okungaphansi kwa-Old San Juan ngenkathi usazi isiqhingi, zama ukuya emikhosini yedolobha. Izingcweti eziqhamuka esiqhingini esisondelene nalezi ziqhingi ziza kule mikhosi zizothengisa izinto zazo: kusuka ekudleni okujwayelekile, amaswidi, ikofi kanye nogwayi kuya kwezingubo, izesekeli, imidwebo nokuhlobisa kwasekhaya. Eminye yalemikhosi ingcono kunenye, yize kunjalo: qiniseka ukuthi ucela izincomo. Eminye yemikhosi ethandwa kakhulu (nokho nokho) yi “festival de las Chinas” noma i-Orange Festival eLas Marías.
Ungakhohlwa ukuthi iPuerto Rico isiqhingi esikhulu esikhiqiza amahemuhemu. Ama-cigar enziwe ngezandla asengatholakala eSan Juan, e-Old San Juan nasePuerta de Tierra. Futhi izinhlobonhlobo zezimpahla ezingeniswayo ezivela kuwo wonke umhlaba zitholakala. Izingcweti zasendaweni zifaka imidwebo eyenziwe ngokhuni, izinsimbi zomculo, ulwelwesi, izindolini, izando, imaski nomsebenzi webhasikidi. Kuwo wonke amadolobha amatasa kukhona izitolo zezipho ezinama-tee-shirts ajwayelekile, izibuko zokudutshulwa, nezinye izipho ezithi iPuerto Rico ilethe ikhaya kubangani nomndeni. Qiniseka ukuthi uvakashela iDistileria Serralles, ikhaya likaDon Q, enye yamaramu amadala kakhulu enziwe ePuerto Rico (logo yakhe ibonakala efasiteleni lemigoqo eminingi ye-PR). Ngeke nje ujabulele izinkambo zenqubo yokwenza i-rum, kepha ukunambitheka okuncane kwe-rum. Zibuye zibe nomnyuziyamu futhi ziyindawo ethokozisayo yantambama efudumele esiQhingini sase-Enchanted.
IPuerto Rico iyinhlangano yokudla okudlula konke. Konke okudingayo imoto, isifiso sokudla (okukhulu ngokwengeziwe), isikhathi, nokuqaphela ukuthi ukubhukuda kwakho ngeke kulunge kanye lapho ufika lapho uya khona. Lesi siqhingi sineminikelo ehluke kakhulu kunayo yonke I-Caribbean. Kukhona okuthile kuwo wonke umuntu. Ungakujabulela ukudla okuhle kakhulu kwePuerto Rican ezigcawini zendabuko zendabuko futhi (kulabo abathola ukukhumbula ekhaya) bane-steak endaweni enjengeMorton's.
Ukudla okujwayelekile kwePuerto Rican: ingulube yengulube (i-chuletas), ilayisi nobhontshisi (i-arroz y habichuelas), ibhodlela le-sofrito nemifino ethize yokujabulisa izivakashi
Coconut Creme, Puerto Rican Natural Candy enziwe nge-Coconut Milk no Ushukela.
Ukudla okuyiqiniso kwePuerto Rican (i-comida criolla) kungafingqwa ngamagama amabili: ama-plantain nengulube, kuvame ukuhanjiswa ngelayisi nobhontshisi (arroz y habichuelas). Kuyaqabukela uma kuye kwenzeka okubabayo, futhi kumangaze izivakashi eziningi akufani kangako nokupheka kwaseMexico.
Ngokungafani namandla amaningi ase-US, iminyaka yokuphuza iPuerto Rico yi-18. Lokho, kuhambisana neqiniso lokuthi i-US ayidingi ukuthi izakhamizi zase-US zithole ipasipoti elizohamba phakathi kwePuerto Rico ne-US yezwekazi lonke, kusho ukuthi iPuerto Rico yindawo ethandwayo yentsha ngekhefu lasentwasahlobo.
IPuerto Rico ngokusobala idume ngama-cock andils ayo asuselwa ku-rum, futhi iyindawo yokuzalwa yomhlaba uPiña Colada owaziwa umhlaba wonke. Izimbumbulu ezimbalwa ezinhle zigcwele ePuerto Rico, kufaka neBacardì, uCaptain Morgan noDon Q. Rum akusona isiphuzo se-connoisseur ngendlela efanayo newayini noma i-whisky, futhi ungathola ukubukeka okungajwayelekile uma ucela kuqondile njengoba injalo cishe njalo udakiwe njengomxube. I-rum esegugile iyaqabula kakhulu ngosuku olushisayo emadwaleni futhi ihlobe ngeqabunga le-mint. Amabhilidi aphezulu ajwayelekile kakhulu I-Cuban imvelaphi; ahlanganisa iMojíto (i-rum, ujusi we-lime, amaqabunga e-mint, namanzi e-Cuba Libre (i-rum ekhulunyiwe ne-cola), evame ukubikwa njengehlaya ngokuthi yiMentiríta (ngokoqobo “amanga amancane”), isiteleka kuhulumeni waseCuba.
Ukukhanya kwenyanga kwendawo kuyaziwa ngokuthi i-pitorro noma i-cañita, egcotshwe (efana ne-rum) kusuka kumoba ovuthiwe. Ngemuva kwalokho kuthululelwa emjetjhweni nezinye ukunambitheka okufana namagilebhisi, umhluzi, imbewu yesinkwa, omisiwe, izinsuku, umango, i-grapefruit, i-guava, uphayinaphu, ngisho noshizi noma inyama eluhlaza. Ukukhiqizwa kwawo, yize kungenamthetho, kubanzi futhi kunohlobo lokuzijabulisa lwesizwe. Uma unenhlanhla ngokwanele yokumenyelwa ekhaya lasePuerto Rican ezungeze isikhathi sikaKhisimusi, kungenzeka ukuthi umuntu ekugcineni azokhipha ibhodlela lawo. Sebenzisa ukuqaphela njengoba kuqinile, kwesinye isikhathi kufinyelela i-80% utshwala ngevolumu (yize amazinga ejwayelekile otshwala esondele kwi-40-50%).
Ngenkathi kaKhisimusi, amaPuertoricans abuye futhi aphuze uCoumm, isiphuzo esinjenge-alcoholgnog esenziwe nge-rum, izikhupha zamaqanda, ubisi lukakhukhunathi, ukhilimu kakhukhunathi, ubisi oluhlotshisiwe olunoshukela, isinamoni, i-nutmeg kanye nama-clove. Cishe njalo kwenziwa okwenziwe ekhaya, futhi kuvame ukunikezwa njengesipho ngesikhathi samaholide kaKhisimusi. Kuyinto emnandi, kodwa caloric kakhulu. Futhi kuzokugula kakhulu uma uphuza kakhulu, ngakho-ke qaphela uma othile ekupha.
Amanzi ompompi ayelashwa futhi aphephile ngokusemthethweni ukuwaphuza, noma enambitheka kunalokho ahlukunyezwe; eziningi zikhetha amanzi asemabhodleleni.
Njengomlando wesimo sePuerto Rico njengesinye sezikhungo zokukhiqizwa komoba emhlabeni jikelele, cishe yonke into iyadakwa noma idliwe noshukela ongeziwe. Lokhu kufaka phakathi ikhofi, itiye, neziphuzo zotshwala, kanye nokudla kwasekuseni okufana ne-avena (okusanhlamvu okushisayo okwe-oatmeal) kanye nama-mallorcas (ama-buns asindayo weqanda angenawo ushukela nojamu). Qaphela lokhu uma unesifo sikashukela.